Okuqukethwe okubandakanyayo, Idatha Yomthengi Okufanele Uyilandele
Idatha Yomsebenzisi Okufanele Uyilandele Kokuqukethwe Kwakho Okusebenzisana
NgoLwesihlanu, Novemba 6, 2015 NgoMgqibelo, Januwari 14, 2017 UMuhammad Yasin
Ngenkathi sonke, ngokwengxenye enkulu, sivuma ukuthi okuqukethwe okusebenzisanayo akuyona into “entsha,” intuthuko kubuchwepheshe bokumaketha yenze okuqukethwe okusebenzisanayo kwaba lusizo kakhulu emizamweni yomuntu yokumaketha. Iningi izinhlobo zokuqukethwe okusebenzisanayo vumela ama-brand ukuthi aqoqe imininingwane eminingi kakhulu kubathengi - imininingwane engasetshenziselwa ukubhekela kangcono izidingo zabathengi kanye nokusiza ngemizamo yokukhangisa yesikhathi esizayo. Into eyodwa abathengisi abaningi abalwa nayo, kepha, ukuthola ukuthi yiluphi uhlobo lolwazi abafuna ukuluqoqa ngokuqukethwe kwabo okusebenzisana. Ekugcineni, kuyindaba yokuphendula lo mbuzo wegolide: “Imiphi imininingwane yabathengi ezoba wusizo olukhulu enjongweni yenhlangano yokuphela?” Nazi ezinye iziphakamiso zedatha yomthengi efanelekile ngempela ukuqala ukulandelela ngesikhathi sokukhushulwa kokuqukethwe okulandelayo okulandelayo:
Ukuqoqa amagama ama-imeyili nezinombolo zocingo kungahle kubonakale kusobala, kepha uzomangala ukuthi bangaki abantu abangakwenzi lokhu. Kunezinhlobo eziningi zemikhiqizo laphaya ezakha okuqukethwe okusebenzisana kwe-stellar ngenhloso yokuqwashisa ngomkhiqizo; ngakho-ke ukuqoqwa kwedatha kugcina sekushanyelwa ngaphansi kombhoxo.
Noma ngabe ngumdlalo noma uhlelo lokusebenza lokuzijabulisa olwenziwe ngokwezifiso, umkhiqizo wakho usengazuza ngokuqoqa lolo lwazi. Ngaphansi komugqa, umkhiqizo wakho ungabamba iphromoshini enkulu ofuna abameli bomkhiqizo (njengalabo abahlanganyele nohlelo lwakho lokusebenza) ukwazi ngayo. Futhi awufuni nje kuphela ukuthi bazi ngakho, kepha ufuna ukuthi basebenzise iphromoshini lapho bethenga esitolo sakho.
Manje, ngithola ngokuphelele ukuthi kunezikhathi lapho kungabi "nengqondo" ukucela imininingwane yokuxhumana. Ngiyakuthola. Ngaphambi (noma nangemuva) kokudlala umdlalo, akekho ofuna ngempela ukwaba imininingwane yakhe. Yize uyazi ukuthi uzosebenzisa imininingwane yokuxhumana nabathengi ngendlela enobulungiswa, esemthethweni nenenhlonipho, kusenabathengi abaningi abasaba ukuthi ngeke. Ngenhlanhla, kunento eyodwa ongayenza eye yaba usizo kakhulu emikhiqizweni eminingi engisebenze nayo - futhi lokho ukuhlinzeka ngohlobo oluthile isikhuthazo sokubuyisela imininingwane eyisisekelo yokuxhumana. Ngemuva kwakho konke, bangasisebenzisa kanjani isipho noma umklomelo wabo uma singazi ukuthi bangobani?
Isikhuthazo singaba sikhulu noma sincane njengoba umkhiqizo wakho ubona kufanelekile. Ngemuva kokudlala umdlalo noma ukuthatha inhlolovo emfushane (noma yikuphi okuqukethwe okuqukethwe kwakho, empeleni), ungabuza ukuthi bangathanda yini ukungena ithuba lokuwina umklomelo omkhulu noma ukungena ukuze bathole isigqebhezana noma isipho . Ngokwemvelo, iphuzu lakho konke lokhu ukuthi abantu bathanda izinto zamahhala (noma ukuthola ithuba lokuwina izinto zamahhala). Abathengi bazothambekela kakhulu ekunikezeni imininingwane yabo ukuze kuthintwe mayelana nezikhuthazo zabo.
Okuhlukile ku-Google Analytics, ukulandelwa komcimbi ukulandelwa komsebenzi kuzinto ezisebenzisanayo zewebhusayithi yomkhiqizo wakho. Le misebenzi (noma "imicimbi") ingaqukatha noma yiluphi uhlobo lokusebenzisana - konke kusuka ekushayeni inkinobho yokudlala / yokumisa isikhashana kuvidiyo, ukushiya ifomu, ukuhambisa ifomu, ukuvuselela umdlalo, ukulanda ifayela, njll. Uhlu luyaqhubeka . Cishe noma ikuphi ukuxhumana ekuxhumaneni nomkhiqizo womkhiqizo wakho kubalwa “njengomcimbi.”
Okwenza ukulandela umcimbi kube lusizo olukhulu ukuthi kunikeza ukuqonda okukhulu ngokuthi abathengi bakho basebenzisa kanjani iwebhusayithi yakho nokuthi banentshisekelo kangakanani kokuqukethwe kwakho. Uma ukulandelwa komcimbi kuveza ukuthi abantu bashaya inkinobho yokudlala kumdlalo kanye, kungaba yinkomba yokuthi umdlalo uyisicefe noma umane awunangxaki ngokwanele. Ehlangothini le-flip, izenzo eziningana "zokudlala" zingakhombisa ukuthi abantu bayawujabulela kakhulu umdlalo osesayithini lakho. Ngokunjalo, ukungaboni ngokwanele imicimbi / izenzo kungaba "inkomba enhle yokuthi okuqukethwe okulandekayo (i-e-guide, ividiyo, njll) akuthakazelisi noma akusizi ngokwanele ukulanda. Lapho ama-brand enalolu hlobo lwedatha, angenza ukuthuthuka okukhulu kokuqukethwe kwawo, kanye namasu awo wokumaketha jikelele.
Ukuhlanganisa ukulandelwa kwemicimbi kuwebhusayithi yakho kungaba yinto ekhohlisayo, kepha ngokubonga, kunendlela yokuqondisa kanjani laphaya (kufaka phakathi eyodwa ku-Googlelokho kungakusiza sebenzisa ukulandelwa komcimbi we-GA kalula kalula. Kukhona nemihlahlandlela eminingi emihle kakhulu yokuthi ungafinyelela kanjani futhi ufunde imibiko evela ku-GA ngemicimbi oyilandelile.
Izimpendulo Eziningi Zokukhetha
Uhlobo lokugcina lolwazi lomthengi engiluncoma kakhulu ukuthi lulandelwe yizimpendulo zokukhetha okuningi kumibuzo, kuhlolo kanye nabahloli. Ngokusobala, imibuzo enezinqumo eziningi (nezimpendulo) izokwehluka kakhulu, kepha kunezindlela ezi-2 zokulandela izimpendulo zezinqumo eziningi ezingasiza umkhiqizo wakho! Kokunye, njengokulandela ngomcimbi, imibuzo nezimpendulo eziningi zokukhetha kuzonikeza umkhiqizo wakho umbono ongcono wokuthi iningi labathengi lifunani noma lilindeleni kuwe. Ngokunikeza abathengi bakho izinketho ezimbalwa ezinomkhawulo ongakhetha kuzo (ngaphakathi kwemibuzo yakho noma inhlolovo), ikuvumela ukuthi uhlukanise impendulo ngayinye ngephesenti; ukuze ukwazi ukuqoqa abathengi abathile ngempendulo yabo ethile. Isibonelo: Uma ubuza umbuzo, "yimuphi kule mibala uma uyintandokazi yakho?" bese unikeza izimpendulo ezi-4 ezingaba khona (Okubomvu, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuluhlaza okotshani, okuphuzi), unganquma ukuthi imuphi umbala othandwa kakhulu ukuthi bangaki abantu abakhethe impendulo ethile. Lokhu ngokuvamile akunakwenziwa ngezimpendulo zokugcwalisa ifomu.
Esinye isizathu sokulandela izimpendulo zezimpendulo eziningi kungaba wusizo ukuthi ama-brand angakwazi ukucija ngokuqhubekayo kubasebenzisi abathile abanikeze impendulo ethile (Isb: ukudonsa uhlu lwabasebenzisi abaphendule ngombala wabo abawuthandayo ngokuthi "obomvu"). Ivumela ama-brand ukuthi abhekane nemizamo yawo yokumaketha kubasebenzisi abathile abakuleso sigaba - noma ngabe kungokumaketha nge-imeyili, imeyili eqondile noma izingcingo. Ngokwengeziwe, ungathola ukuthi abathengi abaphendule ngempendulo ethile banokufana okuthile okufanele kuvunyelwe. Eminye imibuzo emihle ongakhetha kuyo ongayibuza ivame ukubhekwa: isikhathi esibekiwe sokuthenga, uhlobo lomkhiqizo olufunayo, uphawu lwamanje - noma yini engasiza nganoma yiziphi izingxoxo ezizayo, empeleni!
Akunandaba ukuthi yini inhloso enkulu yokuqukethwe kwakho okubandakanyayo, ukuqoqa idatha kunoma yisiphi isici sokusebenzisana komthengi kuwufanele umzamo. Njengoba kuqhamuka izimbangi ezintsha njalo ngosuku olulodwa, kufanele ube nomkhiqizo wakho ukwazi ukuthi obani abathengi bakho nokuthi bafunani. Intuthuko kwezobuchwepheshe ayenzelanga nje kuphela ukuqoqa le datha, kodwa ikwenze kwaba lula kakhulu ukwenza lokho. Ngazo zonke izinsiza ezikhona kubakhangisi, asikho isizathu sokuba ungalandeleli konke!
Yini i-DMARC? Kwenzeka kanjani ukuthi i-DMARC Battle imeyili Phishing?